Izinto eziluncedo ezinokufumaneka ngokupeyinta kophahla kulwakhiwo lwasekhaya-ibhloko yarhente yenyani- realtyWW:
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Ukupeyinta kophahla. Bookmark le Permalink.
Novemba 19, 2017 Iindidi zeShingles zophahla-Into ekufuneka uyazi Ngoku kulula kakhulu ukuba umntu ahlule phakathi kwezinto ezisemgangathweni ezikhusela indlu / ipropathi, efakwe ngokufanelekileyo, kwaye ingqina ukuba eyona nto ilulwakhiwo kuyo yonke indlu. Ulwazi malunga neentlobo ze-shingles luya kukunceda uqonde ngokulula ukuba yeyiphi i-shingles efikelelekayo kwaye iluncedo kwindlu yakho. I-Asphalt Shingles: I-Asphalt shingles yaziwa ngokubonakala nangokufikeleleka kokuthenga. Uhlobo lwe-shingle lusahlulahlulwe lwaba ziindidi ezimbini ezaziwa […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Novemba 4, 2018 Amagadi eGutter abalulekile ekugcineni uLondolozo Inxalenye yendlu yakho ebaluleke kakhulu yophahla kwaye impilo yakho ixhomekeke kakhulu kwisisu. Ewe; ichanekile, sisisu! Isisu yenye yezona zinto zijongelwa kakhulu endlwini yakho. Akukho mntu ukhathaza ukucinga ngayo njengoko inganiki ndawo ngqo endlwini, kodwa isebenza ngokungacacanga ukugcina uphahla lwakho licocekile kwaye lome emanzini. Ukuba isisu sakho asisebenzi kakuhle, uphahla lwakho luya kuba namanzi phezu kwayo lo gama kungekho mntu uyicimayo okanye ubushushu belanga bungayi […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Juni 8, 2019 Yintoni ekufuneka iVandlakanywe kuMonakalo weSiza? Umonakalo obangelwe sisaqhwithi kuphahla lwakho ubaluleke kakhulu kwaye awunakuthintelwa. Nokuba uzama kangakanani ukugcina uphahla lwakho lugcinwe kakuhle kwaye lukhuselekile, uya kuhlala uhleli kwiimeko ezinjalo ngaxa lithile ebomini bakho. Ke, kuya kufuneka uyazi indlela yokujongana nomonakalo ukuze uvavanywe ngokufanelekileyo ngexesha. Nazi iingongoma ezimbalwa eziphambili ezikhankanyiweyo ukukunceda ukuba wenze ngezinto ezibalulekileyo zovavanyo lomonakalo wesivunguvungu. Shingles ezilahlekileyo Kufuneka uhlole uphahla lwakho […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Julayi 12, 2018 Ukunyamekelwa kophahla kunye neengcebiso zokuLungisa eziza kwenza ukuba uphahla lwakho lugqibe Uphahla luyadinwa ngokuhamba kwexesha ngenxa yempembelelo yezinto, kwaye luya kufuneka lutshintshwe endaweni ethile. Nangona kunjalo, zimbalwa izinto onokuzenza ukwenza ukuba uphahla lwakho lukukhonze ixesha elide ngaphambi kokuba ulutshintshe. Ukutshintshwa kophahla kuyabiza kwaye kungakuhle ukuba ungayibamba ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Eli nqaku linikezela ngononophelo lophahla kunye neengcebiso zokulungisa eziza kukunceda ugcine uphahla lwakho kwimeko ye-tiptop kwaye uyenze ihlale amashumi eminyaka. Ezi zinto […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 5, 2017 Ixabiso lokuLungiswa kweNdawo yeZink Kubo bonke abanini bezakhiwo abanesakhiwo nophahla lwe-zinc bahlala bekhathazekile njengoko uphahla lwe-zinc yenye yeendlela ezinqabileyo zokuhlala ezikhoyo emarikeni. Nangona kunjalo, iinkonzo zokulungiswa kwephahla lwe-zinc azinqunyelwe. Udinga ukwazi kuphela iindleko eziqikelelweyo zephahla lokugcina uphahla lwakho lukwimeko elungileyo. Umndilili wepaneli nganye yokulungiswa kwephahla luxabisa i- $ 4.50, kwaye ukuphakama kunye nophahla kuyakubiza i- $ 400 nangaphezulu. Ngoku unokucinga ukuba kuthetha ntoni isikwere sophahla? I […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 8, 2018 Iinkonzo zokuThintela iiwindows eziKhangela amakhaya kunye neeMoto Nokuba abaninimzi bayazi okanye abayazi, bahlala bekhangela izibonelelo zokuba iifestile zabo zichwechwe. Abanye banokuyekela phantsi imeko yomoya ukuthintela amatyala anamandla aphezulu okanye bavale amakhethini ngexesha lasemini ukugcina ukukhanya, imisebe ye-UV okanye ubushushu belanga. Ezi zezinye zeenkxalabo ezenza ukuba abanini-khaya baqwalasele ukutyala imali kwi-tation yefestile yobungcali. Ukupeyinta kwefestile kunika izibonelelo ezahlukeneyo ezibandakanya izincedisi zokuhombisa, ukhuseleko lwe-UV kunye nokhuseleko. Ukusebenza kwamandla […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Februwari 5, 2019 I-Professional Painter iya ku-Outshine yeePropathi kunye nee-Amateurs Uninzi lweekhontrakthi zepeyinti zorhwebo ziya kuba noqeqesho olubanzi nolwazelelekileyo, ulwazi kunye nobuchule bokukhulisa amateurs kunye nepropathi yakho nangeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ngokwesiqhelo, umsebenzi wokupeyinta ufuna ubuchule obuninzi. Rhoqo kunokungabikho xa uqesha umntu ongenamava ngalo msebenzi uya kuba nomsebenzi omubi kakhulu. Umphezulu uya kujonga umbi ngeengubo zepeyinti ezingalinganiyo kuwo. Kukho ezinye izinto ezininzi ezisolayo kwiziphumo ezingalunganga ngaphandle kwemeko yezulu okanye […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Disemba 7, 2018 Zeziphi izinto ezichaphazela ubude bephahla? Ukuba ungumnikazi wendlu okanye sele kuyiminyaka emininzi uhlala endlwini, kukho izinto malunga nophahla, kufuneka wazi. Kuya kufuneka ukuba uyazi ixesha lokuphila kophahla lwakho. Zininzi izinto ezichaphazela ixesha lokuphila kophahla. Ezinye izinto zandisa ixesha lokuphila ngelixa ezinye ziyancipha. Nantsi into ekufuneka uyazi ukuba ukwazi ukulawula enye yazo kukubopha kophahla kwaye enye yimozulu. Amashiti ophahla: Iishawa zophahla zidlala indima ebalulekileyo ekugcineni ubomi obude […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya